ATSINANANA : Lehiben’ny CISCO Mahanoro ; Misy sakana hatrany ny famindram-pitantanana tokony hatao - Midi Madagasikara
DomicileFaits-DiversATSINANANA : Lehiben’ny CISCO Mahanoro ; Misy sakana hatrany ny famindram-pitantanana tokony...
ATSINANANA : Lehiben’ny CISCO Mahanoro ; Misy sakana hatrany ny famindram-pitantanana tokony hatao
Raha tontosa ara-pomba fifanajana ny famindram-pitantanana teo amin’ny lehiben’ny CISCO Toamasina I roa, dia Rtoa Mara Sylvie izay vaovao sy ny Atoa Marolahy Joseph teo aloha, dia tsy tahaka izany ny lehiben’ny CISCO ao Mahanoro fa misy sakantsakana ny fanatontosana izany, ka mihemotra lava ny fanaovana azy, noho ny ataon’ny solombavambahoaka any an-toerana izay mpiara-miasa amin’ity lehiben’ny CISCO hosoloina ao Mahanoro ity.
Araka ny didim-pitondrana laharana 10.781/2021/MEN ny 28 aprily 2021 navoakan’ny minisitry ny Fampianarana dia voatendry ny ho lehiben’ny Cisco ao Mahanoro ao, ka nokasaina natao tamin’ny 04 jona ny famindram-pitantanana raha ny 01 jona no nampahafantarina izany ity lehiben’ny Cisco vaovao ao Mahanoro ity, izay lehiben’ny Cisco teo aloha tao Vatomandry. Tsy tontosa anefa izany noho ny sakana nataon’ny talen’ny kabinetra ny minisitry ny Fampianarana noho ny tatitra nataon’ny solombevambahoaka taminy. Vokatr’io raharaha io dia nivoaka tao anaty tamban-jotran-tserasera fa voabaikon’ny politika ny ministeran’ny Fampianarana izay nanaitra olona maro mahalala ny raharaha. Amin’izao dia re koa fa miandry izany “acte de maintien” izany ny lehiben’ny Cisco ao Mahanoro nosoloina ity, na efa navoakan’ny minisitra aza ny didim-pitondrana manolo azy amin’izany toerana izany. Tsy afa-manohitra ao anatin’izany anefa ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena izay zanaky Mahanoro sady solombavambahoaka ao amin’ny distrikan’i Toamasina I, toraka izany koa ny senatera izay lany teto Toamasina izay ben’ny Tanana tao Mahanoro talohan’izao nirotsahany senatera amin’ny anaran’ny fanjakana izao, ka mahatonga ny olona manontany tena hoe: to-teny amin’ny fanjakana misy azy ve ireo olom-boafidy ireo?…
Hatreto izany dia mbola tsy tafapetraka ny lehiben’ny Cisco vaovao ao Mahanoro, nefa miankina amin’izay no ho avin’ireo mpampianatra any an-toerana, satria ny lehiben’ny CISCO no manao sonia ireo antontan-taratasy ilaina momba ireny mpampianatra ireny. Mbola ny lehiben’ny Cisco koa no mitantana ny vola ho an’ireo mpampianatra tsy mbola mpiasam-panjakana, izay tena ahiana ny ho avin’izy ireo amin’ny ara-karama ao Mahanoro ao. Ny teo aloha mantsy tsy afaka mamoaka izany intsony, nefa ny vaovao tsy mbola tafapetraka.